आमासँग फोनमा बोल्दाबोल्दै दुर्घटनामा परेर मञ्जुले प्राण त्यागिन् ? – Sandesh Press
आमासँग फोनमा बोल्दाबोल्दै दुर्घटनामा परेर मञ्जुले प्राण त्यागिन् ?
October 18, 2021 186
१२ बजिसकेको थियो, जुम्लाको भुलभुलेमा मञ्जु मल्ल (चन्द्रा) ले बिहानको खाना खाँदा।
‘आमा, मैले खाना खाएँ, अब एकछिनमा हामी हिँड्छौँ,’ उनी बाटोमा हरेक क्षणको जानकारी आमालाई दिइरहन्थिन्।
परिवारसँग छुट्टिएको समय लामो थिएन। उनीमात्र दुई हप्ता अगाडि बुटवल गएकी थिइन्। आफ्नो ‘ओजेटी’ पूरा गरेको पेपर बुझाउन।
बुटवलमा ओभरसियर पढेकी उनले ओजेटीका लागि आफ्नै गाउँ छायाँनाथ–रारा नगरपालिका रोजेकी थिइन्। १८ महिनाको ओभरसियर सकिएको खुसी मनमा थियो। परिवारकी जेठी छोरीको पढाइ पूरा हुँदा सबै खुसी थिए। अनि आँगनमै टेकेको दसैँको रौनक पनि।
परिवारलाई थाहा थियो, छोरी घर फर्किँदै छिन् भन्ने। आमासँग फोनमा कुरा भइरहेको थियो। आमा छोरीको बाटो कुरेर बसेकी थिइन्। बाटोको छेउमा आमाको होटल छ। छोरी आउँछे र सँगै घर फर्कौँला भनेर उनी बाटो कुरिरहेकी थिइन्। छाेरी नजिकै आइपुगेकी थिइन्।
करिब दुई बज्नै लागेकाे थियाे। मञ्जु आमासँग फोनमा बोलिरहेकी थिइन्।
उता छोरी चढेको गाडी दुर्घटना भइसकेको थियो। जुम्लाको भुलभुलेबाट हिँडेको करिब दुई घण्टामा गाडी दुर्घटनामा पर्‍यो। आमाछोरीको अन्तिम कुराकानी नै त्यही भयो।
मञ्जु आमासँगै घर फर्किन पाइनन्। प्राण जाने बेलासम्म आमासँग कुरा गरिरहिन्।
होटलबाट दुर्घटना भएको ठाउँ नजिकै छ। देखिन्छ पनि। हिँडेर जाँदा करिब १५ मिनेटमा पुगिन्छ। परिवारका अनुसार गाडी दुर्घटना हुँदाका बखत पनि आमा-छोरीको कुरा भइरहेको थियो।
सबैको कानमा पुगिसकेको थियो दुर्घटनाको खबर। सबै गाउँले जम्मा भए। मञ्जुकी आमा आधा बाटोसम्म पुगिन्, त्यसपछि उनका गोडा चलेनन्। फाेनमा छोरीको अन्तिम आवाज ‘आमा’ सुनेकी उनी त्यहीँ बेहोस् भइन्।
दुई दिनअघि मात्र यो गीतमा टिकटक बनाएर हालेकी थिइन् उनले। परिवारसँगको उनको अन्तिम भेट करिब १४ दिनअघि भएको थियो।
उनको अन्तिम बिदाइ उनका आफन्तले आँखा जुधाएर गर्न सकेनन्। मञ्जुका आँखा बन्द थिए। उनको परिवारले अब कहिल्यै भेट्न पाउने छैन।
मञ्जु मल्लकाे गाउँ
मञ्जुकाे घर छायाँनाथ–रारा नगरपालिकाको वडा नं १ मा छ। आमाको होटल वडा नम्बर ७ मा बस दुर्घटना भएको ठाउँ नजिकै छ।
‘मञ्जु गाउँमै बस्छु भन्थी,’ दिदी दयालक्ष्मीले भनिन्, ‘लोक सेवा आयोगमा नाम निकाल्ने योजना थियो।’
मञ्जुले संसार छोडेको पाँच दिन भैसक्यो। असोज २४ गते मञ्जुले टिकटक बनाएर राखेको भिडियोले आफन्तलाई अझै झस्काइरहन्छ।
असोज २६ गते नेपालगञ्जबाट मुगु हिँडेको भे १ ख ३१६७ नम्बरको बस मुगु–जुम्ला सडकखण्डमा पर्ने मुगुको छायाँनाथ–रारा नगरपालिकाको पिनातपने खोलामा दुर्घटनामा परेको थियो।
दुर्घटनामा ३२ जनाको ज्यान गएको थियो। ज्यान गुमाउने अधिकांश मुगुको छायाँनाथ–रारा नगरपालिकाका छन्।
जसमध्ये मञ्जु पनि एक थिइन्।
Nextट्याक्सीवालाहरु किन यति छाडा ? गाउँबाट काठमाडौँ आउँदा भन्दा ओर्लिएर कोठा पुग्न डबल भाडा ?